Barakac ka bilaawday magaalada Dhuusamareeb iyo Suufida oo dagaal ku iclaamisay Dowladda.
Wednesday August 28, 2019 - 19:45:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa cirka iskusii shareeraya xiisadihii colaadeed ee maalmahan ka jiray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud.
Dhuusamareeb waa magaalo dhacda Bartamaha Somalia/Google
Saacado kadib markii hoggaanka Kooxaha hubeysan ee Suufida uu iclaamiyay dagaal ka dhan ah dowladda Federaalka Soomaaliya ayay colaad hubeysan ka bilaabatay Dhuusamareeb.
Wararka ka imaanaya Galgaduud ayaa sheegaya in dibad baxyo iskasoo hor jeeda ay maanta ka dhaceen fagaarayaasha waaweyn ee magaaladaasi, boqolaal qof oo taageeysan Suufida ayaa isugusoo baxay waddooyinka magaalada waxayna ku dhawaaqayeen Erayo ka dhan ah dowladda.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in taageerayaasha Suufida ay aad uga badnaayeen kuwa dowladda taageersan ee iyana dibad baxyada ka dhigayay waddooyinka Dhuusamareeb waxaana arrintaas loo sababaynayaa maamulka magaalada oo wali gacanta ugu jira kooxda Macalin Maxamuud.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Suufida ay qoryaha daba jeexa loo yaqaan ay dul saareen xarumaha ay ku leeyihiin Dhuusamareeb waxaana magaalada laga dareemayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan.
Dowladda Federaalka ayaa boqolaal askari gaysay magaalada waxaana la saadaalinayaa in haddii uu dagaal dhaco laga itaal roonaan karo kooxda suufida oo laga haysto garoonka diyaaradaha iyo waddooyinka muhiimka ah ee magaalada soo gala.
Ciidamo isugu jira boolis,Nabad sugid iyo Melleteri oo maalmihii lasoo dhaafay diyaarado lagu gaynayay xarunta gobolka Galguduud ayaa helay gaadiid iyo saanado hub ah taas oo sare usii qaadday cabsida laga qabo in ay dagaallo dhacaan.
Qaar kamid ah qoysaskii deganaa magaalada Dhuusamareeb ayaa durbadiiba bilaabay in ay isaga barakacaan guryahooda kadib markii ay xiisadaha colaadeed bilaawdeen, barakacayaasha ayaa ubaqoolay dhanka deegaannada Mareer Guur iyo Guriceel.
Wasiirka arrimaha gudaha DF-ka ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in aysan ka bixin heshiiskii ay lagaleen kooxda suufida, Afhayeen u hadlay maleeshiyaadka Macallin Maxamuud ayaa isna ugu baaqay shacabka magaalada Dhuusamareeb in ay galaan heegan si ay isaga difaacaan wax uu ugu yeeray soo duulayaasha.
Dagaal ka dhacay Afmadoow iyo askari lagu dilay duleedka Kismaayo.
Dagaal khasaara dhaliyay oo ciidamada Itoobiya ku dhaxmaray Soomaaligalbeed.
Al Shabaab oo sarkaal sirdoon ku dilay waqooyiga magaalada Gaalkacyo.